Sanganasa iray amin'ny fampiasana sy famolavolana: Onehub | Martech Zone
Zoma, Jolay 25, 2008 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Amin'ny maha bilaogera b-list anao, matetika ianao no lasibatry ny mpanoratra an-asa, ny mpamorona lozisialy ary ny mpanararaotra milina mitady izay te hampiroborobo ny entany. Tiako anefa ny kendrena amin'izany, satria tiako ny mamaky boky ary tiako ny mahita fampiharana eo amin'ny tsena. Amin'ny maha mpitantana ny vokatra ahy dia tsapako fa sarotra ny maka fampiharana mahay ary mamadika azy ho fampiharana mahatalanjona.
Tsy dia matetika izy io, fa isaky ny indray mandeha, dia mahazo zavatra miavaka ianao. Ny rindrambaiko dia tokony ho tsotra, mora hivezivezy, miaraka amina fiasa izay miandrandra izay tian'ny mpampiasa hatao manaraka. Onehub dia fofonaina madio ary manana izay tadiavin'ny mpampiasa amin'ny fananganana tranokala izay hireharehany manasa ny mpanjifany.
Onehub - mizara fampahalalana momba ny asa
Androany aho dia nahazo fanamarihana tamin'ny alàlan'ny taratasy fangatahako tamin'i Laurel Moudy, talen'ny varotra Onehub. Nanasa ahy sy ny mpamaky 500 ahy ny mailaka (vakio hatrany ny kaody fanasana anao) hanandrana Onehub tsy andoavam-bola. Mampihomehy, tamin'ny fotoana nandraisako ilay fanasana dia namindra ny mailako ihany koa aho Google Apps ka tsy afaka nanamarina ny fisoratako anarana aho. Tsy maintsy niandry hatramin'ny hariva aho.
Mendrika ny fiandrasana.
Raha vantany vao miditra ianao onehub, ny interface dia manaitra, tsotra ary mavesatra Web 2.0. Endritsoratra lehibe sy azo vakiana miaraka amin'ny fifehezana kely ary whitespace ambony indrindra afeno ny habetsaky ny safidy tokony hataonao mba hananganana tranokala tsy mampino.
Miasa ny safidinao voalohany - ahoana no hampiasanao ilay tranonkala?
Ny manaraka dia ny fomba famolavolana, fametrahana ary fanampiana ireo singa ilaina ao amin'ny bilaoginao. Ny interface rehetra dia namboarina tamina tonian-dahatsoratra akaikin'ny WYSIWYG:
Raha vantany vao mamolavola sy manampy ny singa misy anao ianao dia vonona ny handeha ilay tranokala!
Raha te hanandrana an'i Onehub ianao dia tsara i Laurel nandefa kaonty beta 500, ampiasao fotsiny ny kaody fanasana marketingtechnology. Raha masoivoho, mpamorona, na mpamorona tranonkala ianao - aza ampitao ity. Ity dia fampiharana tsara sy mora ampiasaina. Raha tsy anisan'ireo voalaza etsy ambony ianao - fa mila kitapom-bolan'ny tetikasa ary tsy mahay teknolojia, izany no fampiharana tonga lafatra ho anao.
Tags: fiaraha-miasafamolavolanarakitra fizaranaonehubny fiasa izany
Jul 26, 2008 amin'ny 12: 53 AM
Raha manontany tena ianao dia TSY lahatsoratra tohana ity. Tena nahagaga ahy ny kalitao sy ny asany izay niditra tao amin'ny Onehub.
30 Nov 2008 tamin'ny 12:28 PM
Mijery ao amin'ny OneHub aho ary raha vao jerena dia toa zavatra mety miasa amiko izany. Fantatrao ve raha manana fifandraisana mailaka izy io?